အငြင်းပွားမှုတွေကို ဖြေရှင်းပြီး ငြိမ်သက်မှု ရှိစေမလား
ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုး ခံရတဲ့အခါ ယေဟောဝါ နှစ်သိမ့်ပေး
အပြင်ပန်းကို ကျော်လွန်ပြီး ကြည့်နိုင်မလား
“ဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိတဲ့ မင်းကို ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါစေ”
ကြီးမားတဲ့ အရေးကိစ္စကို အာရုံစိုက်ပါ
ယေဟောဝါရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထောက်ခံပါ
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | ဇွန် ၂၀၁၇
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကစ်ကမ်ဘာ ကန်နာဒါ ကန်ယန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကာချီကွီး (အရှေ့ပိုင်း) ကာတာလန် ကာဒစ်ရှ် ကာမန်ဂျီ ကာဒစ်ရှ် ကာမန်ဂျီ (ကာကေးစက်) ကာဒစ်ရှ် ကာမန်ဂျီ (ဆီးရီးလစ်) ကာဘိုင်ယီ ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကီကာအွန်ဒီ ကီကူယူ ကီချူဝါ (ဘိုလစ်ဗီးယား) ကီချူဝါ (အန်ကက်ရှ်) ကီစုန်ဂီ ကီရီဘာတီ ကီရွန်ဒီ ကီလူဘာ ကွန်ဂို ကွမ်ဂါလီ ကွမ်ယာမာ ခရိုအေးရှား ခိုလ် ချက် ချီချေဝါ ချီတမ်ဘူကာ ချီတွန်ဂါ ချီယောင် ချူဗက်ရှ် ဂရိ ဂါ ဂါရီဖူနာ ဂူဂျရာတီ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျူလာ ဂျော်ဂျီယာ ဂွန် ဂွာရာနီ စင်ရန်ဂျာ စင်ဟာလာ စပိန် စရာနန်တွန်ဂို စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘမ်ဘာ စီဘွာနို စော်လမွန်ကျွန်းစု ပီဂျင် ဆက်ဆိုသို (တောင်အာဖရိက) ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆန်ဂို ဆာမိုအာ ဆားဗီးယား ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆီတွန်ဂါ (မာလာဝီ) ဆီဒါမာ ဆီလိုဇီ ဆွာတီ ဆွာဟီလီ ဆွာဟီလီ (ကွန်ဂို) ဆွီဒင် ဇန်ဒီ ဇာပိုတက် (အိစ်မတ်စ်) ဇူးလူး တက်တွန် ဒီလီ တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တဇယ်လ်တယ်လ် တဇော့ဇီလ် တမီလ် တယ်လ်ဂူ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တလာပနက် တာဂျီကီ တာတာ တာ့ခ်မန် တိဗ် တိုဂျိုလာဘယ်လ် တိုတာနက် တီဂရင်ယာ တီရှီလူဘာ တူဗာလူ တူရကီ တော့ခ် ပီဆင်း တွန်ဂန် တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒန်မီ ဒိန်းမတ် ဒီဂါ ဒူအာလာ နာဝါ့တ် (ဂီယာယာရို) နာဝါ့တ် (မြောက်ပိုင်း ပီဘလာ) နာဝါ့တ် (ဟွာစတီကာ) နာဝါ့တ် (အလယ်ပိုင်း) နိုင်ဂျီးရီးယန်း ပစ်ထ်ဂျင် နီပေါ နော်ဝေး ပစ်ထ်ဂျင် (ကင်မရွန်း) ပန်ဂါဆီနန် ပန်ဂျာဘီ ပါပီယာမန်တို (ကုရာစောင်း) ပါရှန်း ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဖီဂျီ ဖောန်း ဗန်ဒါ ဗီယက်နမ် ဘက်စာ (ကင်မရွန်း) ဘက်ရှ်ကီရာ ဘင်ဂါလီ ဘိုင်ကိုးလ် ဘူလ်ဂေးရီးယား ဘောင်လောင် မက်ဆီဒိုးနီးယား မက်ဇီ မင်ဂရီးလီးယန်း မမ် မမ်ဘွေး‑လွန်ဂူ မလေး မာယာ မာရသီ မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မားဇတက် (ဟွာ့တလာ) မိုတူ မူအာရေး မြန်မာ မွန်ဂိုးလီယာ ယူကရိန်း ယောရာဘာ ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ ရှိုနာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား လူဂန်ဒါ လူဗာလီ လူအို လွန်ဒါ ဝက်ရှ် ဝါရေး‑ဝါရေး ဝိုလိတ်တာ သြစတြေးလျ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဟင်ဒီ ဟန်ဂေရီ ဟီဘရူး ဟီရီ မိုတူ ဟီလီဂေနွန် ဟေတီ ခရီအိုးလ် ဟောက်ဆာ အက်စတိုးနီးယား အက်ဒို အက်ဖစ်ခ် အင်ဂါဘာရီ အင်ဇီမာ အင်ဒက်ဘယ်လီ အင်ဒက်ဘယ်လီ (ဇင်ဘာဘွေ) အင်ဒိုနီးရှား အင်ဒွန်ဂါ အင်းဒီးယန်း လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် (ဆီးရီးလစ်) အမ်ဘွန်ဒါ အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အိုက်စလန် အိုင်စိုကို အိုတီတီလာ အိုရိုမို အီတလီ အီဘာနဂ် အီလိုကို အူရ်ဟိုဘို အေမစ် အေမာရာ အော့စက်တီယန် အော့ပေး အေးဝေး ဥဇဘက်
ငြိမ်သက်မှု​ကို မြတ်နိုး​ဖို့၊ ငြိမ်သက်မှု​ကို ဘဝ​မှာ အဓိကထား​ဖို့ ခရစ်ယာန်တွေကို ယေဟောဝါဘုရား တိုက်တွန်း​ထားတယ်။ သင့်မြတ်​ငြိမ်သက်​စွာ နေထိုင်ခြင်း​ကြောင့် စစ်မှန်တဲ့ ဝတ်ပြုသူတွေ ငြိမ်သက်မှု​အလျှံပယ် ခံစား​ကြရတယ်။ ဒါက အငြင်းပွားမှု ကင်းဝေး​လို​သူတွေကို ခရစ်ယာန် အသင်းတော်​ဆီ ဆွဲဆောင်မှု ဖြစ်စေတယ်။
ဥပမာ၊ ယေဟောဝါသက်သေ​တွေရဲ့ စည်းလုံးမှုကို မာဒါဂတ်စကာ​က ထင်ပေါ်တဲ့ မှော်ဆရာ​တစ်ယောက် သတိပြုမိတယ်။ ‘ဘာသာ​တစ်ခုကို ရွေး​ရမယ်​ဆိုရင် ဒီ​ဘာသာ​ကိုပဲ ငါ​ရွေး​မယ်’ လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြောခဲ့တယ်။ အတန်ကြာ​တော့ နတ်ဆိုး​ပညာ​တွေကို စွန့်လွှတ်​လိုက်တယ်။ ကျမ်းစာနဲ့မညီတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေကို လ​နဲ့​ချီ​ပြီး ပြုပြင်တည့်မတ်​ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်း​ရဲ့ ဘုရား ယေဟောဝါကို ကိုးကွယ်သူ ဖြစ်လာတယ်။
သူ့လို​ပဲ နှစ်စဉ် လူ​ထောင်ပေါင်း​များစွာ​လည်း အလွန်​တမ်းတ​နေတဲ့ ငြိမ်သက်မှု​ကို ခရစ်ယာန်​အသင်းတော်​မှာ ရှာတွေ့​နေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသင်းတော်​မှာ ‘မနာလိုစိတ်၊ ငြင်းခုံ​ရန်​တွေ့ချင်​စိတ်’ ရှိနေ​ရင် မိတ်ပျက်​ပြီး ပြဿ​နာတွေ ပေါ်လာ​နိုင်တယ်​လို့ ကျမ်းစာမှာ ရှင်းလင်း​စွာ ဖော်ပြထားတယ်။ (ယာ. ၃:၁၄-၁၆) ဝမ်းသာစရာ​က​တော့ ပြဿနာတွေ​ကို ဖြေရှင်းနိုင်ပုံ၊ ငြိမ်သက်မှု တိုးပွား​စေနိုင်​ပုံ​နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြံပြုချက်​ကောင်း​တွေကို ကျမ်းစာမှာ ဖော်ပြထားတယ်။ ဖြစ်ရပ်မှန် အခြေအနေ​တချို့ကို သုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။
“အတူ​အလုပ်လုပ်​တဲ့ ညီအစ်ကို​တစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်တော် အဆင်မပြေ​ဘူး။ တစ်ယောက်​ကို​တစ်ယောက် အော်ဟစ်​ပြောဆို​နေတုန်း လူ​နှစ်ယောက် ရောက်လာပြီး တွေ့​သွားတယ်။”—ခရစ္စ။
“အတူ​ အမှုဆောင်ထွက်​လေ့​ရှိတဲ့ ညီအစ်မ​တစ်ယောက်က ရုတ်တရက်​ကြီး အမှုဆောင်​အစီအစဉ် ဖျက်​လိုက်တယ်။ ကျွန်မ​နဲ့လည်း စကား​မပြော​တော့ဘူး။ ဘာကြောင့်​မှန်း​ကို မသိ​ဘူး။”—ဂျန်းနက်။
“သုံးယောက်​အတူ ဖုန်း​ပြော​ကြ​တယ်။ တစ်ယောက်က နှုတ်ဆက်စကား ပြော​လို့ ဖုန်း​ချ​သွားတယ်​ထင်​ပြီး သူ့မကောင်းကြောင်း​တွေကို နောက်​တစ်ယောက်နဲ့ ပြောမိတယ်။ တကယ်တော့ သူ ဖုန်း​မချ​သေး​ဘူး။”—မိုက်​ကယ်။
“ကျွန်တော်တို့ အသင်းတော်​မှာ ရှေ့ဆောင် ညီအစ်​မ​နှစ်ယောက် ပြဿနာ ဖြစ်ကြ​တယ်။ တစ်ယောက်​ကို​တစ်ယောက် ကြိမ်းမောင်း​ပြောဆို​ကြ​တယ်။ ဒါက တခြားသူတွေကို စိတ်ဓာတ်ကျ​စေတယ်။”—ဂယ်ရီ။
အထက်ပါ​အခြေအနေ​တွေ သေးငယ်​တယ်လို့ ထင်​ရနိုင်​တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုစီ​က ပါဝင်ပတ်သက်​သူတွေကို တစ်သက်လုံး စိတ်ပိုင်း၊ ဘုရားရေးရာ​ပိုင်း ထိခိုက်​စေနိုင်​တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ​ညီအစ်ကို/မ​အားလုံး ကျမ်းစာကို လမ်းညွှန်​အဖြစ် သုံးပြီး ငြိမ်သက်မှု ပြန်​ရခဲ့​ကြ​တယ်။ ဘယ်​ကျမ်းစာ လမ်းညွှန်ချက်တွေ​ကို သူတို့ အောင်မြင်​စွာ ကျင့်သုံး​ခဲ့ကြသလဲ။
“လမ်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စိတ်ဆိုး​မနေ​ကြပါ​နဲ့။” (က. ၄၅:၂၄) ဖခင်​ဆီ ပြန်တော့​မယ့် အစ်ကို​တွေကို ယောသပ် အဲဒီလို ပြောခဲ့တယ်။ အလွန်​ပညာရှိ​တဲ့ စကား​တွေပါ​ပဲ။ လူတစ်ယောက် ကိုယ့်​ခံစားချက်ကို မထိန်းချုပ်​ဘဲ အလွယ်တကူ စိတ်ဆိုး​ရင် တခြားသူတွေကို ဒေါသထွက်​စေနိုင်​တယ်။ မိမိ​အားနည်းချက်​က မာနကြီး​ပြီး လမ်းညွှန်ချက်ကို လက်ခံဖို့ တွန့်ဆုတ်​တတ်​ခြင်း​ဖြစ်ကြောင်း ခရစ္စ သိလာ​တယ်။ ပြောင်းလဲ​ချင်တဲ့​အတွက် အငြင်းပွား​ခဲ့တဲ့ ညီအစ်ကို​ကို တောင်းပန်​ပြီး ဒေါသ​ကို ထိန်းချုပ်​ဖို့ ကြိုးစား​ခဲ့တယ်။ ပြောင်းလဲဖို့ ခရစ္စ ကြိုးစား​တာ​ကို သတိထား​မိ​ပြီး အလုပ်ဖော်​လည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲ​ခဲ့တယ်။ အခု ယေဟောဝါကို ပျော်ရွှင်​စွာ အတူတကွ ဝတ်ပြု​နေကြ​ပြီ။
“တိုင်ပင်​ဆွေးနွေး​တာ မရှိရင် အစီအစဉ်​တွေ ပျက်​တတ်တယ်။” (ပညာ. ၁၅:၂၂) ဒီအမှန်​တရားကို ပို​နှလုံးသွင်း​ဖို့ လိုအပ်တယ်​လို့ ဂျန်းနက် ယူဆတယ်။ ဒီ​အကြောင်းကို ပြဿနာ​ဖြစ်တဲ့ ညီအစ်မ​နဲ့ “ဆွေးနွေး” ဖို့ ဆုံးဖြတ်​ခဲ့တယ်။ နာကြည်း​နေတဲ့​ကိစ္စ​ကို ဖွင့်ပြော​ဖို့ ညီအစ်မ​ကို ဂျန်းနက် လမ်းကြောင်းပေး​ခဲ့တယ်။ အစပိုင်းမှာ အတော်လေး တင်းမာ​ခဲ့​ပေ​မဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဆွေးနွေး​ရင်း အခြေအနေ တိုးတက်​လာတယ်။ ဂျန်းနက်​နဲ့ ဘာမှ​မဆိုင်​တဲ့ကိစ္စ​ကို နားလည်မှု​လွဲ​နေမှန်း ညီအစ်မ သိလာ​တယ်။ ဒါနဲ့ တောင်းပန်​ပြီး ယေဟောဝါကို အတူတကွ ဝတ်ပြု​နေကြတယ်။
“ပူဇော်ရာပလ္လင်​ဆီ အလှူ​ယူလာ​နေတုန်းမှာ ကိုယ့်ကို မကျေမနပ်​ဖြစ်နေ​တဲ့ ညီအစ်ကို​ကို သတိရ​သွား​ရင် အလှူ​ကို ပလ္လင်​ရှေ့မှာ ထားခဲ့​ပါ။ ညီအစ်ကို​ဆီ သွားပြီး သူနဲ့​ပြေလည်​အောင် အရင်​လုပ်ပါ။” (မ. ၅:၂၃၊ ၂၄) တောင်ပေါ်တရားတော်​မှာ ယေရှု ပေးခဲ့တဲ့ ဒီ​အကြံဉာဏ်​ကို သင်​မှတ်မိ​မှာပါ။ မိမိ​လုပ်ရပ်​က ထောက်ထားစာနာမှု၊ ကြင်နာမှု မဲ့​သွား​မှန်း မိုက်​ကယ် သိလာတဲ့​အ​ခါ စိတ်ပျက်​မိတယ်။ ငြိမ်သက်မှု ပြန်ရအောင် ကြိုးစား​ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ထိခိုက်အောင် လုပ်မိတဲ့​အတွက် ညီအစ်ကို့​ကို နှိမ့်ချ​စွာ မျက်နှာချင်းဆိုင် တောင်းပန်​ခဲ့တယ်။ ဘာ​ရလဒ် ရခဲ့​သလဲ။ “ညီအစ်ကို​က ကျွန်တော့်ကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ခွင့်လွှတ်​တယ်” လို့ မိုက်ကယ် ပြောတယ်။ ခင်ခင်မင်မင် ပြန်​ဖြစ်သွား​ကြ​တယ်။
“အချင်းချင်း မကျေနပ်​စရာ ရှိနေ​ရင်တောင် ဆက်​ပြီး​သည်းခံ​ကြပါ၊ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ခွင့်လွှတ်​ကြပါ။” (ကော. ၃:၁၂-၁၄) သက်တမ်းကြာ ရှေ့ဆောင်​နှစ်ယောက်​ရဲ့ ဖြစ်ရပ်​မှာ ကြင်နာ​တတ်တဲ့ အကြီးအကဲ​က ဒီမေးခွန်း​တွေကို ပြန်သုံးသပ်ဖို့ ကူညီပေး​ခဲ့တယ်– ‘လူ​နှစ်ယောက်​ရဲ့ သဘောထားကွဲ​လွဲ​မှုကြောင့် တခြားသူတွေကို စိတ်ထိခိုက်​အောင် လုပ်သင့်​သလား။ အချင်းချင်း​ကို သည်းမခံ​ဖို့၊ ယေဟောဝါကို ငြိမ်းချမ်း​သင့်မြတ်​စွာ ဆက်​ဝတ်​မပြု​ဖို့ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းရင်း တကယ်​ကော ရှိ​ရဲ့​လား။’ အကြီးအကဲ​ရဲ့ အကြံဉာဏ်​ကို သူတို့ လက်ခံကျင့်သုံး​ခဲ့ကြတယ်။ အခု ချစ်ချစ်ခင်ခင် သတင်းကောင်း ဟောပြော​နေကြ​ပြီ။
အထက်​မှာ ကိုးကားခဲ့တဲ့ ကောလောသဲ ၃:၁၂-၁၄ ကို ကျင့်သုံးခြင်း​က သင့်ကို တစ်ယောက်ယောက် စိတ်ထိခိုက်​ စေ​တဲ့အခါ ကူညီပေး​နိုင်တယ်။ နှိမ့်ချမှု​ကြောင့် ခွင့်လွှတ်​ပြီး မေ့​ပစ်လိုက်​နိုင်​ကြောင်း လူများစွာ တွေ့ရှိ​ခဲ့ကြ​ပြီ။ အတော်အတန် ကြိုးစားပြီး​နောက် အဆင်မပြေ​သေး​ရင် မဿဲ ၁၈:၁၅ မှာပါတဲ့ မူကို ကျင့်သုံး​နိုင်တယ်။ လူတစ်ယောက် တခြားတစ်​ယောက်​အပေါ် ကြီးလေး​တဲ့​အပြစ် ကျူးလွန်မိ​တဲ့ အခြေအနေ​မှာ လုပ်ဆောင်​ရမယ့်​အရာ​ကို ယေရှု ဆိုလို​နေတာ​ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ​မူကို သင်​လိုက်နာ​နိုင်ပါတယ်။ ညီအစ်ကို/မ​ဆီ သွားပြီး ပြဿနာ​ကို ကြင်နာစွာ၊ နှိမ့်ချ​စွာ ဆွေးနွေး​ဖြေရှင်း​လိုက်​ရုံ​ပါပဲ။
ကျမ်းစာမှာ တခြား​လက်တွေ့ကျ အကြံပြုချက်​တွေလည်း ရှိပါ​တယ်။ အများစုက​တော့ “စွမ်းအားတော်​ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရည်အသွေး​တွေ . . . ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကြင်နာခြင်း၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ချုပ်တည်းခြင်း​တို့” ကို တင်ပြခြင်း​အပေါ် မူတည်​နေပါတယ်။ (ဂလ.​ ၅:၂၂၊ ၂၃) စက်​ကို ချောမွေ့​စေတဲ့ ဆီ​လိုပဲ ဘုရားရေးရာ အရည်အသွေး​တွေ​က သင့်မြတ်​အောင် လုပ်ဆောင်​ရာမှာ ချောမော​စေနိုင်​တယ်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး​မျိုးစုံ ရှိ​ခြင်းက အသင်းတော်ကို ကြွယ်ဝ​စေ
တစ်ဦးစီ​မှာရှိတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တစ်မျိုးစီ​က မိတ်ဆွေကောင်း​တွေ ရရှိ​စေနိုင်​တယ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး မတူ​တဲ့အတွက် အငြင်းပွားမှု​တွေ ဖြစ်လာ​နိုင်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံ​ရှိတဲ့ အကြီးအကဲ​တစ်ယောက် ဒီလိုပြောတယ်– “ရှက်တတ်​သူ တစ်ယောက်ယောက်​ဟာ ပွင့်လင်း​ပြီး စကား​ကျယ်ကျယ် ပြောတတ်​သူ​နား​မှာ နေရတာ အဆင်မပြေ​ဘူး။ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ကွဲပြားမှု​လို့ ထင်​ရပေမဲ့ ကြီးလေး​တဲ့​ပြဿနာတွေ ဖြစ်စေ​နိုင်တယ်။” ကွဲပြား​တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး​ရှိသူ​တွေမှာ ပြဿနာတွေ ပို​ဖြစ်နိုင်တယ်​လို့ ထင်​ပါသလား။ တမန်တော် နှစ်ယောက်​အကြောင်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ပေတရု​က ဘယ်လို လူစား​မျိုး​လဲ။ ပွင့်လင်း​ပြီး စိတ်​လိုက်​မာန်​ပါ လုပ်​တတ်​သူ​လို့ တွေးမိ​နိုင်တယ်။ ယောဟန်​ကော။ ချစ်ခင်​တတ်​ပြီး တွေး​တွေးဆ​ဆ ပြောဆို​လုပ်ကိုင်တတ်​သူ​လို့ တွေးမိ​မယ်။ အဲဒီလို တွေးမိ​နိုင်​စရာ အကြောင်းရင်း​တွေ ရှိ​နိုင်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ကွဲပြား​တယ်။ ဒါပေမဲ့ အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်​ခဲ့ကြတယ်။ (တ. ၈:၁၄။ ဂ​လ. ၂:၉) ဒါကြောင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တော်တော်​ကွဲပြား​တဲ့ ခရစ်ယာန်တွေ အတူတကွ လုပ်ဆောင်​နိုင်ပါတယ်။
အသင်းတော်​မှာ ကိုယ့်​စိတ်နဲ့ မ​တွေ့​တဲ့ အပြောအဆို၊ အပြုအမူ​ရှိတဲ့ ညီအစ်ကို​တစ်ယောက် ရှိ​နိုင်တယ်။ သူ့​အတွက် ခရစ်တော် အသေခံ​ခဲ့တယ်၊ သူ့ကို မေတ္တာ ပြ​ရ​မယ်​ဆိုတာ သိထား​တယ်။ (ယော. ၁၃:၃၄၊ ၃၅။ ရော. ၅:၆-၈) ဒါကြောင့် သူ့ကို မိတ်ဆွေ​စာရင်း​ထဲကနေ ဖျက်​ပစ်လိုက်​မယ့်အစား၊ ရှောင်ဖယ်​မယ့်အစား ‘ငါ့​ညီအစ်ကို​က ကျမ်းစာနဲ့ မညီ​တာ​တစ်ခုခု လုပ်​နေလို့​လား။ ငါ​စိတ်အနှောင့်အယှက်​ဖြစ်အောင် တမင်​လုပ်​နေတာ​လား။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး မတူ​တာပဲ​လား’ လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးသင့်တယ်။ အရေးကြီးဆုံး​က​တော့ ‘သူ့ရဲ့ ဘယ်​အရည်အသွေးကောင်း​က​နေ ငါ​အကျိုးရ​နိုင်မလဲ’ လို့​မေး​ဖို့​ပဲ။
နောက်ဆုံး​မေးခွန်း​က အရေးကြီးတယ်။ သူက စကားများ​တယ်၊ ကိုယ်က စကား​နည်း​တယ်ဆိုရင် အမှုဆောင်လုပ်ငန်းမှာ သူ​စကားစမြည် စပြော​တဲ့အတွက် ဘယ်လောက် အဆင်ပြေ​မယ်​ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းမှာ အတူ​လုပ်ဆောင်​ဖို့ ဖိတ်ခေါ်​ပြီး သူ့​ဆီက သင်ယူ​ပါ။ သူက တခြားသူတွေ​အပေါ် ရက်ရော​တတ်တယ်၊ ကိုယ်က တွန့်တို​တယ်ဆိုရင် အသက်ကြီးသူ​တွေ၊ မကျန်းမာ​သူတွေ၊ လိုအပ်သူ​တွေကို ပေးကမ်းခြင်း​က​နေ ရရှိတဲ့ ပျော်ရွှင်မှု​ကို သတိပြု​ကြည့်ပါ။ အဓိက,က​တော့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး မတူ​ပေ​မဲ့ ကောင်းကွက်​ကို အာရုံစိုက်​ခြင်းအားဖြင့် သင်တို့​နှစ်ဦး ပို​ရင်းနှီး​လာနိုင်တယ်။ အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေတွေ မဖြစ်​လာ​ရင်တောင် အချင်းချင်း ပို​ရင်းနှီး​လာပြီး သင်​ကိုယ်တိုင်​ရော အသင်း​တော်​မှာပါ ငြိမ်သက်မှု ခံစားရ​နိုင်တယ်။
ဧ​ဝေါ​ဒိ​နဲ့ သုန္တုတ်​တို့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး အတော်လေး ကွဲပြား​ခဲ့​နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ “သခင့်​အမှုတော်ဆောင်​တဲ့အခါ တစ်စိတ်တစ်သဘော​တည်း ရှိ​ကြ​ဖို့” သူတို့ကို တမန်တော် ပေါလု အားပေးခဲ့တယ်။ (ဖိ. ၄:၂) သင်လည်း အလားတူ ပန်းတိုင်​ထားပြီး လုပ်ဆောင်​နိုင်မလား။
ပန်း​ဥယျာဉ်​ထဲက ပေါင်းပင်​တွေလိုပဲ တခြားသူတွေနဲ့​ပတ်သက်တဲ့ မကောင်းတဲ့ ခံစားချက်တွေ​ကို အမြစ်​ပါ​မကျန် ဆွဲမနုတ်​ရင် ပိုတိုး​ပွား​လာ​လိမ့်မယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ​ နာကြည်း​စိတ် အမြစ်တွယ်​ပြီ​ဆိုရင် အသင်းတော်တစ်ခုလုံး​ကို ဂယက်ရိုက်​လာနိုင်တယ်။ ယေဟောဝါနဲ့ ညီအစ်ကို/မတွေကို ချစ်​မယ်ဆိုရင် သဘောထားကွဲ​လွဲ​မှုတွေ​ကြောင့် ဘုရားသခင့်​လူမျိုးရဲ့ ငြိမ်သက်မှု မပျက်စီး​ဖို့၊ ယုတ်လျော့​မသွား​ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားကြ​ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှိမ့်ချပြီး ငြိမ်သက်မှုရှိဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး ရလဒ်တွေ ရရှိနိုင်
သင့်မြတ်​ဖို့ ပန်းတိုင်​နဲ့ အငြင်းပွားမှု​တွေ၊ သဘောထားကွဲ​လွဲ​မှုတွေ​ကို ဖြေရှင်း​မယ်ဆိုရင် ရလဒ်ကောင်း​တွေကြောင့် အံ့ဩ​ရပါလိမ့်မယ်။ ညီအစ်မ​တစ်ယောက်​ရဲ့ အဖြစ်​ကို သုံးသပ်​ကြည့်ပါ– “ညီအစ်မ​တစ်ယောက်က ကျွန်မကို ကလေး​လိုပဲ ဆက်ဆံ​နေတယ်​လို့ ခံစားရ​တယ်။ တအား စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်​ရတယ်။ ကြာ​လာ​တော့ မချေမငံ ဆက်ဆံ​မိတယ်။ ‘ငါ့ကို ထိုက်သင့်သလို မလေးစား​လို့ ငါလည်း သူ့ကို လေးစား​စရာ မလိုဘူး’ လို့ တွေးမိ​တယ်။”
ကိုယ့်လုပ်ရပ်​ကို ဒီ​ညီအစ်မ ပြန်​စဉ်းစား​မိတယ်။ “ကိုယ့်​အားနည်းချက်​ကို မြင်​လာပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်ပျက်​မိတယ်။ ကျွန်မ ပြောင်းလဲ​ရ​မယ်​ဆိုတာ သိလာ​တယ်။ ဒီကိစ္စ​ကို ယေဟောဝါ​ဆီ ဆုတောင်းပြီး​နောက် ညီအစ်မ​ကို လက်ဆောင်​လေး​တစ်ခု ဝယ်​ပေးပြီး တောင်းပန်​စာ​လေး ရေးခဲ့တယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဖက်ပြီး ဖြစ်ပြီး​တာတွေကို မေ့​လိုက်​ဖို့ သဘောတူ​လိုက်​ကြ​တယ်။ နောက်ထပ် ပြဿနာ မရှိတော့​ဘူး။”
လူတွေ ငြိမ်သက်မှု​ကို အလွန်​တောင့်တ​ကြ​တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ အခွင့်အရာ​နဲ့ မာန်မာန​ကို ထိပါး​လာတဲ့အခါ သင့်သင့်မြတ်မြတ် မဖြေရှင်း​ကြ​တော့ဘူး။ ယေဟောဝါကို မကိုးကွယ်​သူတွေ အဲဒီလို လုပ်​တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယေဟောဝါ​နာမည်ကို ခံယူသူ​တွေ​အလယ်​မှာတော့ ငြိမ်သက်​စည်းလုံးမှု ရှိ​သင့်တယ်။ “ကျွန်တော်က ခင်ဗျား​တို့ကို ခေါ်တော်မူခြင်း ခံရသူ​တွေ​ပီ​ပီ ကျင့်ကြံ​နေထိုင်​ကြပါ​လို့ တောင်းပန်​ချင်​တယ်။ အမြဲ​စိတ်နှိမ့်ချ​ပါ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့​ပြီး စိတ်ရှည်​ပါ။ အချင်းချင်း မေတ္တာထား​ပြီး သည်းခံ​ပါ။ အချင်းချင်း သင့်သင့်မြတ်မြတ်​ရှိ​ကြပါ။ သန့်ရှင်းသော စွမ်းအားတော်​ကြောင့် ရလာ​တဲ့ စည်းလုံးမှု​နှောင်ကြိုး​ကို ကြိုးစား​ထိန်းသိမ်း​ပါ” လို့ တမန်တော် ပေါလု​ ရေးခဲ့တယ်။ (ဧ. ၄:၁-၃) အဲဒီ “စည်းလုံးမှု​နှောင်ကြိုး” က အလွန်​အဖိုးတန်တယ်။ အဲဒီ​နှောင်ကြိုး​ကို ခိုင်မြဲ​စေ​ကြပါစို့။ ပေါ်လာ​နိုင်တဲ့ ဘယ်​သဘောထားကွဲ​လွဲ​မှုကို​မဆို ဖြေရှင်းဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်​ထားကြ​ပါစို့။
သဘောထားကွဲ​လွဲ​ပေ​မဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ ဖြစ်တဲ့ ပေါလုနဲ့ ဗာနဗ
ပေါလုဟာ ခံစားချက်​ပြင်းထန်​သူ ဖြစ်တယ်။ ခရစ်ယာန် ဖြစ်မလာ​ခင်​တုန်းက “သခင့်​တပည့်​တွေကို ခြိမ်းခြောက်၊ သတ်ဖြတ်​ချင်စိတ် ပြင်းထန်” ခဲ့တယ်။ (တ. ၉:၁) ခရစ်တော်ရဲ့ နောက်လိုက်​တွေကို “ဒေါသစိတ်မွှန်” ခဲ့​မိတယ်​လို့ နောက်ပိုင်းမှာ ဝန်ခံ​ခဲ့တယ်။—တ. ၂၆:၁၁။
နှစ်ခြင်းခံ​ပြီးနောက် အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲ​ခဲ့​ပေ​မဲ့ နာမည်​ဆိုး​တော့ ရှိနေတုန်း​ပဲ။ ခရစ်ယာန်​ဖြစ်ပြီး မကြာခင်​မှာ ဂျေရုဆလင်​မှာရှိတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ​က ပေါလု “ယေရှုရဲ့​တပည့် ဖြစ်လာ​တာ​ကို မယုံကြ​တဲ့အတွက် မ​ပေါင်း​ရဲ​ကြဘူး။”—တ. ၉:၂၆။
အသင်းတော်​က ပေါလု​ကို မယုံ​ရဲ​သေး​ပေ​မဲ့ ဆိုက်​ပ​ရပ်​ကျွန်းသား ယောသပ်​က​တော့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး။ ယောသပ်​ကို ချစ်ခင်​တတ်​သူ​အဖြစ် လူသိများ​တယ်။ ဒါကြောင့် “နှစ်သိမ့်ခြင်း​ရဲ့​သား” လို့ အဓိပ္ပာယ်​ရတဲ့ “ဗာနဗ” ဆိုပြီး ညီအစ်ကိုတွေ နာမည်​ပေးထားတယ်။ (တ. ၄:၃၆၊ ၃၇) အသင်းတော်​မှာ ဦးဆောင်​သူတွေ သူ့ကို လေးစား​ကြ​တယ်။ ပေါလု​ကိုလည်း သူ​ကူညီပေး​ခဲ့တယ်။ “ဗာနဗ​က ရှောလု​ကို ကူညီ​တဲ့​အနေနဲ့ တမန်တော်​တွေဆီ ခေါ်သွား​တယ်။ သခင်​ကို လမ်းခရီး​မှာ ရှောလု မြင်ခဲ့​တဲ့​အကြောင်း၊ . . . ဒမတ်စကတ်​မြို့မှာ ယေရှုရဲ့​နာမည်​နဲ့ ရဲ​ရဲရင့်​ရင့် ဟောပြော​ခဲ့တဲ့​အကြောင်း အသေးစိတ် သူ​ပြောပြ​လိုက်တယ်” လို့ ဖတ်​ရတယ်။ (တ. ၉:၂၆-၂၈) ဗာနဗ​ရဲ့ သက်သေ​ထွက်ဆိုချက်​ကြောင့် ဂျေရုဆလင်​အသင်းတော်​က ပေါလု​ကို လက်ခံခဲ့​တယ်။ မကြာခင် သူတို့​နှစ်ယောက် သာသနာပြု​တွေအဖြစ် အတူ​အမှုဆောင်​ခဲ့ကြတယ်။—တ. ၁၃:၂၊ ၃။
ပေါလု​ရဲ့ စိတ်ထက်သန်မှု​နဲ့ ပွင့်လင်းမှု​ကို ဗာနဗ တွေ့မြင်ခဲ့​မှာပဲ။ ဗာနဗ​ရဲ့ ကြင်နာမှု၊ ထောက်ထားစာနာမှု​ကိုလည်း ပေါလု တန်ဖိုးထားလေးမြတ်​ခဲ့မှာပဲ။
တစ်ချိန်​မှာတော့ သူတို့ “အကြီးအကျယ် အငြင်းပွား” ကြ​တယ်လို့ ကျမ်းစာမှာ ဖော်ပြထားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ပြဿနာ ဖြစ်တယ်လို့ မဖော်ပြ​ထားဘူး။ သာသနာပြု​လုပ်ငန်း​အတွက် ယောဟန်​မာကု​ရဲ့ အရည်အချင်း​နဲ့ပတ်သက်ပြီး သဘောထားကွဲ​လွဲ​ခဲ့ကြ​တာပါ။—တ. ၁၅:၃၆-၄၀။
ပေါလုနဲ့ ဗာနဗ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ကွဲပြား​ပေ​မဲ့ အ​ငြင်း​မ​ပွား​ခင်​အထိ အတူ​အမှုဆောင်​နိုင်ခဲ့​ကြ​တယ်။ ပေါလုနဲ့ မာကု​လည်း နောက်ပိုင်းမှာ အတူ​အမှုဆောင်​ကြ​တယ်လို့ ဖတ်​ရတယ်။ (ကော. ၄:၁၀) ဒါကြောင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ကွဲပြားမှု​က အငြင်းပွားမှု မဖြစ်​စေ​ပါဘူး။ အရင်တုန်းက မဖြစ်​စေခဲ့​သလို ဒီနေ့လည်း မဖြစ်​စေ​ပါဘူး။
အသံသွင်းထားရာကို ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဇွန် ၂၀၁၇